Akụkụ gbara ọchịchịrị nke Mozis (II): Họrọ nke gị! | Site na Linux
Akụkụ gbara ọchịchịrị nke Mozis (II): Họrọ nke gị!
mgbochi | | Ọdịdị / Nhazi
Tupu ịga n'ihu na XMonad na ụlọ Debian dịka nkwa ya na post gara aga, Achọrọ m ịme nkụda mmụọ ka anyị wee nwee ike ịhọrọ nke ọma ma chekwaa onwe anyị oge ma rụọ ọrụ iji nweta tebụl anyị ka anyị rụọ ọrụ. Yabụ ka anyị bido n'ụtụ izugbe.
0.1 Tupu ịmalite
0.2 Gịnị ka anyị ga-achọ?
1 Ihe ndi ozo
4 .Zọ aghụghọ
5 Njikwa Window Site na ọkọ
6 Spectrwm (nke bụbu scrotwm)
7.1 Onweghi ozo?
8 Ntụle Ndị Ọzọ na Azịza Ọsọ
Gụọ akwụkwọ ntuziaka ahụ. Ọtụtụ oge anyị na-emehie na-egbu egbu site n'ịgụghị akwụkwọ ntuziaka. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị njikwa taịl nile ga-eji ihu igwe na-ekpo ọkụ kelee gị oge izizi ị na-agba ha. Atụna ụjọ. Ọ bụrụ na ị banyela ebe a ma amaghị ihe ị ga-eme, pịa na pịnye nwoke insert-your-window-manager ebe a. Ndi nile m gbaliri weta nkowa bara uru banyere otu esi eji ha. Ka ịlaghachi na gburugburu ebe nkiri, pịa na njikere. Ọ bụ ezie na ịkwesịrị ịme nke a tupu ị na-agba ọsọ ọ bụla.
Atụla egwu nke ọnụ. Are ga-eji ya ọtụtụ, nke mere na enwere ụzọ mkpirisi maka ya site na mbido n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla. Ekwadoro m rxvt-unicode, m ga-akọwa ihe kpatara ya ma emechaa.
Edepụtaghị na mado faịlụ nhazi na-enweghị nyochaa ha. Nke a dị oke mkpa, n'ihi na emebere ntọala ndị a maka onye ọrụ, ọ bụghị maka gị. Agbanyeghị, ihe na-atọ ụtọ bụ iji nlezianya debe ha ma hụ ihe baara gị uru. Naanị m na-akwado idetuo & mado mgbe ha pere mpe faịlụ, ndị isi ma ọ bụ mkpụrụ koodu.
Jiri nwayọ mee ya. Gburugburu ya agaghị adaba na nke mbụ ya. Ga-ata ahụhụ njehie na njikwa windo gị, nke ahụ bụ eziokwu. Ya mere, debe eserese eserese nke ị na-agba ọsọ ugbu a ma hụ na ị maara otu esi alaghachi na ya n'oge ihe mberede. Emechara m kọwaa etu.
Gịnị ka anyị ga-achọ?
Ọ bụla Linux na-ekesa. Ruo ugbu a, ihe ọ bụla, ọ dị mma.
Onye ndezi ederede, ọkacha mma nke enwere ike ịgba ọsọ na ọdụ.
A ọnụ emulator. Ihe gburugburu desktọọpụ wetara zuru.
I merie 😀
Ugbu a ihe dị mma na-amalite, anyị ga-ahọrọ onye njikwa windo n'etiti kọbọd na-enweghị ngwụcha na mbara igwe. Ya mere zaa ajụjụ a, mana naanị otu okwu: Kedu ihe ị na-eme na kọmputa gị?. Mmemme? You na-ụgbọ mmiri? Write na-ede? You na-agụ? Ozugbo azara ajụjụ a, m na-atụ aro: Chọọ onye njikwa nke ahaziri na asụsụ mmemme ị na-eji. Nyochaa ma ọ bụrụ na njikwa dị na nkesa gị. Fọdụ dị ọhụụ nke na ha abụghị. Anyị na-amalite.
Na ihu ọma: Ebube sitere na DWM, afọ ole na ole gara aga. Malite na alaka 3, ọ malitere ịhazi onwe ya site na Lua, asụsụ mgbatị siri ike. Ọ bụ ihe ọhụụ, ebe ọ bụ onye mbụ jiri ụlọ akwụkwọ ọhụụ XCB ọhụrụ mee ihe Xlib mebiri emebi. Ọ nwere obodo siri ike nke ndị ọrụ. Site n'ịdabere na Lua, ị ga-enweta ọbá akwụkwọ ọkọlọtọ na ọbá akwụkwọ ndị ọzọ nke na-agbatị ọrụ ya, dị ka wijetị. Ọ nwere ya ngosi usoro, dị ka gwa-osd; enwere ike ịhazi ya na Lua. Na-akwado bọtịnụ. O nwere nhazi ole na ole maka otutu Moses.
Megide: Ọtụtụ ndị ọrụ enweghị ike ibili mgba ọkụ na Lua. Nhazi faịlụ ndị buru ibu ma belata nha ha ịmara ihe banyere Lua. Oge ụfọdụ ị nwere nsogbu na Xcompmgr. Ọ bụrụ na ị mebie nhazi ị laghachi na nke ahụ bụ nke ndabara, ọ naghị edebe nke gara aga.
Ihe ndetu: Ọ naghị eji desktọọpụ arụmọrụ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị aha mmado. Enwere ike ịhazi ya ka ngwa wee nwee mkpado ụfọdụ.
Na ihu ọma: Ọ bụ ezie na ọ na-ada ka mmụọ, eziokwu ahụ bụ na ọ mepụtara na Haskell na-eme ka ọ bụrụ ihe na-adịghị mfe nchinchi na njehie mmadụ ma ọ siri ike. Ọ bụrụ na nhazi ahụ (na nke a, a na-atụgharị gburugburu ebe obibi) adabaghị, ọ na-eme ka nke gara aga wee zitere gị ozi na ọ mere. Nhazi faịlụ dị ntakịrị ma dị mfe nghọta. Ihe na-adabara ya na ihe niile.
Megide: Dabere na Haskell bụ isi nsogbu ya. Nbudata ya na-egosi ibudata ngwugwu haskell-platform, ma ọ bụ opekata mpe ghc, nke buru ibu. Haskell nwere ike ịbụ (ọ dịkwa) ntakịrị ma ọ bụrụ na iji usoro mmemme arụ ọrụ (maka ngwa ngwa: gaa mee nke a megide nke a bụ ihe a, gaa tụlee ya). Ọ naghị akwado bọtịnụ, dịka m maara. Ọ nwere obere nhazi dị na ndabara.
Ihe ndetu: Enwere ike ịhazi ya ka ọ daba na gburugburu desktọọpụ zuru ezu. Echere m, mana anaghị m emesi gị obi ike, na ọ na-aga Gnome na Xfce ozugbo. Enwere ike itinye ọtụtụ ndọtị ya ozugbo site na mwepụ, ebe nchekwa Haskell, site na ntinye dị mfe, ọ bụ ezie na ọ na-ewe obere oge n'ihi na ọ na-achịkọta ha mgbe ị na-ebudata.
Nke a bụ nke m ga-eji ihe atụ nke isiokwu ga-eme n'ọdịnihu.
Na ihu ọma: Ọ na-eji Rubi, yabụ nhazi ya anaghị agwụ ike. Ruby dị mma yana syntax doro anya. O nwere njikwa ngwugwu nke ya, iji wụnye ihe ntinye, a na-akpọ sur. Ọ na-eto n'ike n'ike, nke na-ekwu maka ogo ya. Ọ nwere usoro mkpado siri ike, dị ka egwu, mana ọkaibe karịa, ọ nwere ike ịba uru nye ụfọdụ. Ndabere ya bụ rxvt-unicode, yabụ tụọ aka na aghụghọ; Ọfọn, imirikiti n'ime ha hapụrụ anyị ya, ọ dịkwa mma na ọ nwere ya ma ọ bụrụ na ị ga-eji ya.
Megide: O yighị ka ọ nwere ọtụtụ ihe ọmụma dị n'asụsụ anyị.
Ihe ndetu: Ewezuga usoro mkpado siri ike, ọ na-eji sistemụ tiling dị iche iche, dabere na grids. Anwalebeghị m ọtụtụ iji kọwaa ya nke ọma, mana ọ dị ka kewaa ebe ọrụ n'ime mpaghara ndabara kama ịhapụ ya na ngwa ahụ na-eji ya.
Ntọala: Via isi okwu C na faịlụ automake
Na ihu ọma: Ọ bụ otu n'ime ndị a ma ama, nna dị egwu ma bụrụkwa akụkụ nke usoro mgbanwe nke ndị mmepe nke ngwa ọrụ na-enweghị atụ, usoro ngwaọrụ ndị ahaziri iji nye ndị ọrụ aka dị ukwuu. Ọ bụrụ na ịmara dmenu, ị makwa ihe m na-ekwu.
Megide: Onwe m anwalebeghị ya, yabụ enweghị m mkpesa. Ndị mmadụ na-ekwu okwu ọma banyere ya.
Ihe ndetu: Were gagharịa n’ogige nke Amaghị ya mere ha nwere ike ihu ihe ha n’eme.
Njikwa Window Site na ọkọ
Ntọala: Onwe nhazi faịlụ
Na ihu ọma: Ọ na-akwado ọtụtụ atụmatụ ejiri naanị ndị njikwa mmemme nwere ike ịnye, dị ka bọtịnụ, isi okwu, na akara ngosi, ma nwee obodo na-eguzosi ike n'ihe, na-agbasa ngwa ngwa.
Megide: Obere akwukwo n'asusu anyi.
Ihe ndetu: Aha ya yiri ihe na-emegiderịta onwe ya, n'ihi na ọ naghị atụ aro ka anyị wuo gburugburu anyị, mana anyị na-ahazi ya naanị. O yiri otu esi kọwaa Awesome, usoro maka ịmepụta ndị njikwa windo anyị, mana nke a na-eme.
Ihe nkiri (nke bụbu scrotwm)
Na ihu ọma: Ọ na-arụ ọrụ nke ọma na igbe na config file na-kwuru si ezu iji melite ya. O nwere ogwe aka ya, nke nwere ike igosi mmeputa nke otu iwu. Ọ bụ ngwa ngwa.
Megide: Fọdụ nwere ike na-eche ntakịrị ihe efu, n'ihi na ihe ụfọdụ efunahụ na ndị njikwa ndị ọzọ nwere ike nweta site na mmemme ihe dị mfe.
Ihe ndetu: Ọ bụrụ na ị ka na-eche ihe kpatara aha a ji gbanwee, gbalịa gụọ aha ochie ahụ n’ụzọ zuru ezu, dịka ị siri chọọ. Otutu ndi mmadu choputakwara aka na akuku aka nke omumu nwoke.
Ntọala: Lisp na-ahụkarị
Na ihu ọma: Ọzọ na-eji asụsụ arụ ọrụ dịka nhazi. Ọ bara uru maka ndị ejiri Emacs Lisp.
Megide: Anwalebeghị m ya. ya mere amaghi m. Otu n'ihi na amaghị m ihe ọ bụla gbasara Lisp.
Ihe ndetu: Onweghi ihe ichoputara, karia ihe ichoro nke onye oru obi uto StumpWM, nke nwere obi uto:
N'ezie m na-eme, mana amaghị m ha ma ọ bụ na ha agafela m na ntuziaka a. O yikarịrị ka asụsụ mmemme ị na-amụ (m na-ekwu, ọ bụrụ na ị dị) ejirilarịrị nhazi dị maka otu. Mana n'agbanyeghị na ha niile bụ ihe ekike ma ọ bụghị nke okike, ọ pụtaghị na ha edoghị onwe ha n'ọsọ maka nlanarị, yabụ enwere ọtụtụ ọrụ agbapụrụ agbapụ ma ọ bụ nke nwụrụ anwụ n'ihi na ha enweghị onye ọ bụla ha ga-ejere ozi. oge.
Ntụle Ndị Ọzọ na Azịza Ọsọ
Gini kpatara rxvt-unicode? urxvt (a na-akpọ ya dị ka nke a, mana ngwugwu a na-akpọ rxvt-unicode) bụ emulator ọnụ na-akwado 256 agba, Perl ndọtị, taabụ na na; bara ezigbo uru n'ihi na ngwa ọnụ na-eji atụmatụ agba, na-adị mfe nhazi na urxvt, iji gosipụta na ihuenyo; na-eme ka ọrụ nke inwe a mara mma ma na n'otu interface nnọọ mfe.
Olee otu m ga esi eme ebube nke DotShare.it? Ọ bụrụ na ị maara ibe a, ị ga-agagharịworị na faịlụ nhazi nke ndị nwere ọmịiko na-etinye ha ebe ahụ, ọbụlagodi na ọ dị ka ha na-eme ya iji gosi. Ihe niile bụ inyocha ha, ịmụ ihe n’aka ha, itinye ya na njikwa window gị na ịgafe mkpịsị aka gị ka ọ rụọ ọrụ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị maghị ihe ị na-eme.
Kedu ka ị si gbanwee n'etiti tebụl?Gbanwee faịlụ ahụ
nke mere na e nwere otu na naanị otu akara na-ekwu
Ọ bụrụ na ị nọ na Arch ma eleghị anya ị meela ya, naanị ị ga-agbanwe ahịrị ahụ, sịnụ,
Nke a na-arụ ọrụ na iwu mmalite ma ọ bụ na ebughibu. Ọ bụrụ na inweela ihuenyo nnweta dị ka GDM ma ọ bụ KDM, ha ewetala ihe ịgbanwe usoro.
Onye ndezi ederede ọ dị mkpa? Ma n'ezie ọ bụ. Ọ bụrụ na ọ na-agba ọsọ na ọdụm ka mma, n'ihi na tiling na-adaba na ọnụ ya. Ọ bụrụ na ị maghị nke, ị nwere ike ịmalite na nano. Ndị ọzọ na-agba ọsọ n’elu ọdụ bụ Vi, Vim, na Emacs, mana ị ga-achọ ụfọdụ ọzụzụ iji mee ha nke ọma. A na-akpọ ha niile n'aha, enweghị nsogbu na nke ahụ.
Na ntọala? Ka oge na-aga. Na mgbakwunye, enweghị m ike ịnye gị ntọala ị na-achọ maka njikwa ọ bụla, naanị n'ihi na enweghị m ike iji ha niile.
Enwere ịhọrọ site na. Ugbu a ee, oge ọzọ anyị ga-ezute, m ga-eme nkọwa zuru ezu banyere faịlụ mmba.mm isi, generalist na ndi ozo, na ulo Debian. Hụzie gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ọdịdị / Nhazi » Akụkụ gbara ọchịchịrị nke Mozis (II): Họrọ nke gị!
Oscar Silva dijo
ezi m, na-eche sgte. post 😉
Zaghachi Oscar Silva
Hmm, na-adọrọ mmasị. Amaara m ihe ụfọdụ banyere Lua, yabụ enwere ike ịnwale egwu
Ihe dị mma bụ na Awesome ị hụrụ ya n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkesa niile, ọbụlagodi ụlọ Debian
Mma, agbalịrịla m ya. Ọ na-adịghị anya siri ike, ma ọ bụghị ihe m na-achọ 😛
Soyez Premiya !!
Nwoke ukwu, + 1. Imirikiti ndị na-agba ọsọ Google -na n'ozuzu- na-eji Xmonad mana dịka ị na-ekwu na ọ bụ asụsụ mba ọzọ, m ga-anọdụ nwayọ iji nyochaa ya, enwere ezigbo nkuzi ebe a: http://www.learnhaskell.com; Ọzọkwa isiokwu nchịkọta Glasgow abụghị obere, ọ bụrụ na ị naghị eji Haskell kwa ụbọchị ma ọ bụ bụrụ onye na-akwado Xmonad, ị ga-ebudata anụ ọhịa 700mb ahụ naanị iji nwee ebe pere mpe, haha!
Dị ka WM na-adọrọ mmasị ma dị mfe iji m ga-agbakwunye na ndepụta gị i3wm (www.i3wm.org), gburugburu ebe obibi zuru oke, yana ogwe ọnọdụ agbakwunyere (gbakwunye maka ịhapụ igbu oge ịhazi ihe ọ bụla), hyper dị mfe na faịlụ nhazi dị mfe iji hazie ụdị Windows .ini ma ọ dịkwa na mmepe zuru oke.
Dị ka WM chọrọ ịmata: DSWM (Deep Space WM), dabere na StumpWM ma lekwasị anya na ndị Fans Emacs ... Abụ m onye ofufe Emacs, mana enweghị ebili mmiri na DSWM xD
Maka ugbu a na mgbe m nwesịrị ndị niile ị kpọrọ aha na ndepụta ahụ, mụ na 3 dị egwu kemgbe m na-ahụghị ngbanwe ngbanwe nke nhazi ruo ugbu a enwebeghị m nsogbu na WM a (na-eji ụdị kachasị ọhụrụ) ma achọpụta m ọ dị ike ma na-agbanwe agbanwe, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke zuru oke iji dochie desktọọpụ zuru ezu dị ka KDE SC.
Na-amasị m dwm na m ji ya ruo ogologo oge, mana ịbụ super minimalist m na-ahụ na ọ kọrọ ọtụtụ ihe m na-eji; WM ọzọ m nwere mmasị na ya bụ Musca, nke a gbahapụrụ ugbu a, ọ bụ ezie na ha mepụtara ya ka ọ na-ejigide ọtụtụ ihe dị mkpa, agbanyeghị njikwa nke ọkwa ọkwa site na Awesome na i3 ka nke ọma.
Otu nke masịrị m dịkwa aghụghọ - ọ bụ ezie na anaghị m eme mmemme na Ruby ọ bụ ihe mgbakwunye n'ihi na m hụrụ asụsụ a n'anya, ozugbo m nwere oge m ga-anwale ya n'ụzọ miri emi, ọ dị m ka ọ dị ọkụ karịa egwu site na ihe ha kwuru na oru ha kwuru na ha na-enye ya otu ọrụ.
Ntuziaka: ọ bụrụ na ị na-eji WM ma ọ bụ * ndị njikwa igbe, gbalịa Compton -X onye na-ede akwụkwọ nke xcompmgr-dana ekwuolarị na blọọgụ a, ọ dịkarịa ala _excellent_ (echetaghị m onye zitere akụkọ mbụ mana ekele!)
ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke zuru oke iji dochie desktọọpụ zuru ezu dị ka KDE SC.
Enwere ike ọ bụghị * niile * KDE, mana ee Kwin. Ijikọta ya na KDE kwesịrị ịdị ukwuu
Haha! Ọ bụghị ederede, n'ezie!
Mana Awesome zuru oke ma na-arụ ọrụ nke ọma.
Lee, KDE SC 4.9.1 na Arch Linux x86_64, na-eji kernel Liquorix 3.5.4 na njikarịcha ohere ịnweta CPU -nyere na cgroups- Ulatencyd + ụfọdụ obere mmezi tweaks (na /etc/sysctl.conf na ụfọdụ ebe ndị ọzọ) Ọ na-arụ ọrụ ọ dị mma mana SO, SO SO SOOOO GOOD nke na ọ dị ka mpụ ịghara iji ya, ọ bụ silk, ọ masịrị m! XD
Tụkwasị na nke ahụ, njikwa ike nke KDE SC 4.9.1 kwesịrị nkebi nke ya: iji ihe eji eme ihe site na gburugburu ebe obibi ka kachasị nke ọma na ịchekwa ike - na-ekwu okwu mgbe niile banyere iji igwe na okporo ụzọ na batrị - nke nwere ike inye gị iji a WM dị ka Awesome ma ọ bụ dwm (abụọ m jiri mee ihe kachasị) bụ ihe na-adịghị mma, WOW! KDE SC 4.9.1 nwere oke oriri batrị! Anyị na-ekwu maka desktọọpụ zuru ezu / juputara na njirimara PREMIUM megide njikwa windo nwere traybar o_O
Enwekwara ajuju nke ndi mmadu na-amaghi: ebe GNOME nwere ihe ndi mmadu na-eme ka ndi mmadu jiri aka ha na ndi mmadu jikota ya, na-ekwusi ike nkwado nke asusu na ihe ntinye nke ihe di iche iche, KDE bu ndi oru ndi choro. maka ihe karịrị eserese eserese na gịnị kpatara na ọtụtụ ndị na-agba ọsọ na nke a gosipụtara n'ọtụtụ nkọwa 'zoro ezo', dịka ọmụmaatụ:
1. Ka anyị gaa na desktọọpụ nnyocha. N'okwu m enwere m ahazi ya n'ụzọ abụọ:
Nke mbu. N'ime Ntọala Sistemụ anyị na-aga Workspace Behviour (Echere m na n'asụsụ Spanish ọ ga-abụ akparamagwa nke wọkspeesi ma ọ bụ ihe yiri ya), ebe ahụ ka anyị na-ahọrọ ihu ihuenyo (ihuenyo ihu?) Ma mgbe ahụ na ihuenyo ọ bụla anyị na-ahọrọ mmetụta mmetụta Destkop Grid (M nwere ya na ala n'aka nri nri)
1 B. na nchịkọta ihuenyo nke Sets System. anyị na-aga Uzo mkpirisi na ndị njikwa (echere m ihe dịka mmegharị ahụ na mkpirisi ụzọ mkpirisi) mgbe ahụ Igodo Uzo mkpirisi Global (mkpirisi keyboard ụzọ mkpirisi) na n'ikpeazụ na KDE Component combo anyị na-achọ KWin. Ugbu a naanị ihe fọdụrụ bụ ikechi Gosi Desktọpụ Grid mmetụta (echere m na Spanish ha sụgharịrị ya dị ka Gosi desktọọpụ grid ma ọ bụ ihe yiri nke ahụ) na mkpirisi ụzọ dị mma maka anyị (na nke m Meta + s).
Ebe m na-aga: enwere nkọwa na-adọrọ mmasị maka mgbe anyị na-arụ ọrụ na ọtụtụ tebụl.
Mgbe ị na-arụ ọrụ nlele Desktọpụ Grid, ọ bụghị naanị na anyị na-ahụ desktọpụ desktọọpụ niile nke anyị nyeere kamakwa ngwa niile dị na nke ọ bụla, na-enwe ike ịdọrọ ha n'etiti desktọọpụ.
Ugbu a, ọ bụrụ na ị pịa aka nri na nke ọ bụla n'ime ngwa ndị a, anyị ga-ahụ na otu windo enyo na-egosi na akpaghị aka na desktọọpụ ọ bụla, nke mere na anyị na-arụ ọrụ na desktọọpụ anyị na-arụ ọrụ, anyị ga-enwe windo ahụ mgbe niile (ya bụ, )) ma nke a anaghị agwụ ebe a! Ọ bụrụ na anyị pịa aka nri ọzọ na ngwa ahụ anyị gosipụtara na mbụ, mana na desktọọpụ ọzọ, ngwa ahụ na-akpaghị aka, na-ahapụ naanị ihe atụ ya na desktọọpụ ebe anyịjiri aka nri ya.
Dị ka ihe atụ a, enwere ọtụtụ akwụkwọ edenyere na anyị na-achọpụta oge na-aga ka anyị na-eji KDE SC.
Njikọ Haskell gị na-eduga na ibe banyere NET. Agaghị http://learnyouahaskell.com njikọ ị na-ekwu maka ya?
Onye ga - enye XMonad ịnwale, dịka m ma ihe gbasara Haskell ma ọ nwere ike ịbụ ụzọ dị mma iji tinye ya n'ọrụ. Ndi nke ozo aburula m gbaliri i3 na Ihe di egwu. i3 gbagwojuru m anya, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ karịa mgbagwoju anya karịa Awesome ..
Kpọọ ekele, edere m ya na ebe nchekwa. Otu ajụjụ: mgbe ị na-ekwu "wouldnye ga-anwale XMonad, dịka m maara ihe banyere Haskell ma ọ nwere ike ịbụ ụzọ dị mma iji tinye ya n'ọrụ. Ndi nke ozo aburula m gbaliri i3 na Ihe di egwu. i3 gbagwojuru anya, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ ihe mgbagwoju anya karịa Awesome. » You ji eziokwu ka ọ bụ na ị na-egwu egwu? Ma ọ bụ ị si na mbara ụwa ọzọ wee pụta na ọ bụ ya mere ị jiri Haskell, ka ị ghara ileghara ala nna gị!
i3 bụ HYPER dị mfe, n'eziokwu echere m na ọ nwere ike ịbụ ọkwa WM ntinye maka ndị niile chọrọ ihe dị mfe ma dịkwa njikere iji. Ejiri otu faịlụ ahazi ya, ~ / .i3 / config ebe nhazi bu udiri:
[agbanwe] = [uru]
na ebe ị nwere ike ịhazi nhazi niile na i3 wiki iji gbanwee font, họrọ njedebe nke ihuenyo ebe ị ga-arịba ogwe ọnọdụ, wdg. N'ezie, a na-ahazi ọkwa ọkwa iji gosipụta ozi nke ụdị ọ bụla: batrị, ntinye na njikọ ntanetị njikọ nke NIC niile metụtara, ụbọchị na oge, tray system ebe akara ngosi tray nke mepere ngwa ndị ọzọ pụtara (dịka ọmụmaatụ KWallet), wdg.
Ma n'ezie, ọ bụrụ na ị mmemme Haskell m were ya na ọ bụ ihe ezi uche dị na ya na ihe dị mfe dị mgbagwoju anya nye gị, haha!
Hah, kedu ihe, ezitere m ya HYPER gringo na 😛
Emela nke a n'ụlọ ụmụaka, na Spanish anyị na-eji ihe maka HIPER =)
I3 dị mfe mere ka m nwee mgbagwoju anya xD anaghị m eji ya iji kwado onwe m n'ihi na achọpụtara m egwu n'oge na-adịghị anya.
Na m na-agaghị trolling, Ama m Haskell na ọtọ mmemme 😛
E nwere nsụgharị n'asụsụ Spanish ma n'eziokwu ọ bụ nke m na-eji, ọ dị http://aprendehaskell.es/
Enwere m olileanya na m na-emeziwanye dị ka onye edemede, na post gara aga enwere m njehie na-egbu egbu, dịka m kwuru, etinyeghị m ụfọdụ n'ime ha n'ihi na amaghị m ha. Banyere.
Enyi m bụ ikwu ogologo okwu.
Fọdụ etinyeghị m ha n'ihi na amaghị m ha, yabụ itinye ha ga-abụ ihe nzuzu n'ihi na enweghị m ike ịkọ akụkọ banyere ha.
N'ihe metụtara ihe mejupụtara, enwere ndị kwenyere na ọ bụ ihe na-ekwekọghị n'okike iji jikọta tiling na nghọta. Amaghị m ihe kpatara ya, mana echere m na ọ bụ n'ihi stylistic na ndị ahịa, n'ihi na ndị njikwa a na-ejikarị ngwa ngwa ochie ma ọ bụ obere arụ ọrụ.
Ka o sina dị, daalụ maka ịza ajụjụ. 😀
"N'ihe metụtara ihe mejupụtara, enwere ndị kwenyere na ọ bụ ihe na-ekwekọghị n'okike iji jikọta tiling na nghọta."
N’ezie, azịza m n’okwu ndị a bụ otu mgbe niile: Gbanyụọ.
Ọ dị ka mgbe ị na-akọwa ọrụ maka otu ọnọdụ metụtara mbanye unyi, ihe jọgburu onwe ya, nke ọjọọ jọgburu onwe ya na mgbe ahụ ndị akwụna niile na-akwa iko na-awụlikwa elu dị ka mmiri ara ehi sie na-asị mba, nke ahụ ezighi ezi, nke ahụ ezighi ezi ... azịza m: nke ahụ na-a itụ ya.
Ọ bụ eziokwu na koodu dị ọcha na nke na-adị ọcha na-eme ka ọ dịkwuo mfe ijikwa ya yana na ọtụtụ usoro vanilla na obere hacks ị mere ya, ọ dị mfe karịa onye na-amaghị gị hacks anaghị achọ , nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị bụ n00b n'ezie ị ga-atụ ụjọ imetụ ihe «ị ekwesịghị imetụ aka» (WTF na echiche apocalyptic ahụ, metụ, gbajie, mụta wee mbanye anataghị ikike), mgbe ị r00t ma ọ bụ opekata mpe _yo maara usoro gị_ (MAARA FBỌR F UCBỌCH) gị) ị nwere ike ịme ma ị ga-eme ihe ọ bụla ịchọrọ, ihe masịrị gị na otu ị chọrọ isi mee ya.
Na onye dere ya bụ otu: onye ọ bụla na-ara ara ma bụrụ onye ihere maka iji WM ya na onye na-ede ihe na-agakwuru onye na-agwọ ọrịa uche n'ihi na ọ dịghị mma n'isi.
Enwere ihe ole na ole m na-eleda anya karịa "ndị ọcha" (ndị na-amachakarị ihe gbasara ya) bụ ndị na-achị achị ma bụrụ ndị na-enweghị ihe okike karịa brik oghere na enweghị ike ịpụ na ebu ha dabara.
Mara usoro gị => mee ihe ọ bụla masịrị gị _ụzọ gị_.
Ọ dịghị njọ. Ndị ọrụ a kwesịrị ịdị obere, yabụ ide ha ga-ebugote ha ọzọ. Ọzọkwa, ọnụ na-enweghị nghọta doro anya nke ọma.
Ka osila dị, Achọghị m ịma; ọ bụ ezie na ejikarị m tiling anaghị m edebe ihe mejupụtara.
M na-eji Awesome, na eziokwu bụ na ọ bụ nanị "egwu". Mana site na ndepụta ị tinyere ọ dị ka nke kachasị mma bụ Subtle (ọ bụrụ na ịmara Bekee), tumadi n'ihi Ruby bụ asụsụ dị mfe iji mụta yana Python. N'ezie, ọ bụ ihe kwere nghọta ihe faịlụ .rb na-etinye na ile anya. Achọrọ m ịnwale ya 🙂
A wm nke ahaziri na Python dị mma -> http://qtile.org/
Ihe na-adịghị m mma bụ na ọ dị ka faịlụ faili nhazi gị enweghị ike ịhazi ya dịka o kwesiri ịdị. Ga-emetụ koodu mmalite nke usoro ihe omume ahụ iji hazie ya na mmasị gị iji tinye, dịka ọmụmaatụ, atụmatụ agba.
Zaghachi ka socrates_xD
M na-eji Awesome, na eziokwu bụ na ọ bụ nanị “egwu”.
Kpamkpam! Awesome di egwu, dika odi.
Ezigbo ozi, m na-eji aghụghọ ma dị egwu ma eziokwu ahụ bụ na ahụrụ m ha abụọ n'anya, mana aghụghọ dị mfe iji hazie ma ọ bụrụ na ị maghị rubi, n'ọnọdụ m anaghị m eme ihe ọ bụla ma amaghị m Asụsụ achọpụtara m na ọ dị mfe ịdegharị ma hazie m mmasị aghụghọ karịa egwu. Ekele !!!
Abụ m onye Linux hụrụ n'anya - Abụghị m onye mmemme - Abụ m Onye Mmụta Dị Mfe - ugbu a, m na-amụta ijikwa i3_wm yana ihe ọghọm (ịmụ ịnyagharịa na uzbl-nchọgharị-na ọkwa ya achọpụtara m aha nke kiiboodu bara uru iji gbanwee ihe arụnyere na i3_wm (Mod5 + intro)) ejisiri m ike hazi »~ / .i3 / config» iji megharịa usoro keyboard enyi na enyi, wee wee rụọ ọrụ ọnụ ..., kedu ihe ọ joyụ m nwere. .., ọ dị ka iwere nzọụkwụ na ọnwa, ezigbo enyi enyi enyi - 🙂 (11 - 04 - 2013 / Chile - Penco - VIII Region)